Soo dejisan Amolto Call Recorder for Skype 3.21.1 ... – Vessoft
WindowsInternetkaIsgaadhsiintaAmolto Call Recorder for Skype
Bogga rasmiga ah: Amolto Call Recorder for Skype
Amolto Call Recorder for Skype – software ah si ay u qoraan wadahadallada maqalka iyo video-ga ee Skype. Barnaamijka wuxuu si toos ah u bilaabmaa inuu diiwaan geliyo wicitaanada wuxuuna kaydiyaa dhammaan cajaladaha ku jira habka saxda ah iyo tayada sare leh sida ku cad caddeynta wadahadalka. Barnaamijkani ma laha xayiraad ama xaddidid wakhti diiwaangalinta wadahadalka caadiga ah, wicitaannada fiidiyoo kooxeed, bandhigyo muuqaal ah, fiidiyow laga soo qaaday shaashadda isticmaalaha, iwm. Amolto Call Recorder ee Skype ayaa kuu ogolaanaya inaad ku darto qoraallo iyo MP3-tags wadahadal si ay u muujiyaan daqiiqadaha ugu muhiimsan ee wada hadalka iyo kala sooc taariikhda call, si ay u raadiyaan rikoorka la doonayo in si fudud loo fududeeyay. Barnaamijku wuxuu leeyahay qalab lagu baddalayo tayada cajaladaha maqalka iyo fiidiyowga kaas oo aad ku dhageysan kartid ama aad ku arki kartid ciyaaryahaanka lagu dhisay. Amolto Call Recorder ee Skype wuxuu leeyahay muuqaal gaar ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad ka duubto codka jihe kasta, oo kaliya dhinaca user-ka ama kaliya oo uu dhexdhexaadiye.
Diiwaan galinta wicitaanka ee automatic
Waqtiga qorista xaddidan
Diiwaangelinta maqalka iyo fiidiyowga iyadoon lumin tayada
Ciyaartii warbaahinta ee la dhisay
Ku darista qoraallada ama MP3-tags ee cajaladaha
Qorista codka labada dhinac ama mid uun
Soo dejisan Amolto Call Recorder for Skype
Faallo ku saabsan Amolto Call Recorder for Skype
Amolto Call Recorder for Skype Xirfadaha la xiriira